सुरू नै नभई रमेश खरेलले... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
सुरू नै नभई रमेश खरेलले किन छोडे ‘हाम्रो नेपाल हामी नेपाली’ अभियान?
तस्बिर : रमेश खरेलको फेसबुकबाट।
बुधबार बिहान पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले पत्रकारहरूलाई सन्देश पठाए- क्रिष्टल पार्टी प्यालेसमा बिहीबार दिउँसो तीनदेखि पाँच बजेसम्म हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको उदघाटन छ। तपाईंको उपस्थितिका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं।
हाम्रो नेपाल र हामी नेपाली अभियानको संयोजकको हैसियतमा खरेलले उक्त निम्तो पठाएका थिए।
२४ घन्टा नबित्दै बिहीबार बिहान उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखे- मेरो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिका कारण म, देवेन्द्र सिटौला र राजकुमार यादव आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुन सक्दैनौं। असुविधाका लागि क्षमा चाहन्छौं।
उनको काबुभन्दा बाहिरको त्यस्तो परिस्थिति के आइलाग्यो त? हामीले यो प्रश्न खरेललाई सोध्यौं।
उनले भने- दुइटा कुरा मिलेन। पहिलो मोडालिटी, दोस्रो अभियानको दर्शन।
‘हामीले पहिला सबै प्रदेश र जिल्लाहरूमा जाऔं। मान्छेका कुरा सुनौं। अनि बल्ल संगठन बनाऔं भनेका थियौं,’ खरेलले भने,‘उहाँहरूले अहिले नै पदको बाँडफाँट गरौं भन्नुभयो। कुरा पनि घुमाइफिराइ गर्न थाल्नुभयो। हामीलाई शंका लाग्यो।’
खरेल, पूर्वसचिव सिटौला र पर्साका समाजसेवी यादवको कुरा नमिलेको ज्ञानेन्द्र शाही समूहसँग हो। शाही नेपालका लागि नेपाली भन्ने अभियानबाट निकालिएका थिए। त्यसपछि उनले खरेललाई मिलेर काम गर्न प्रस्ताव गरेका थिए।
‘म फौजी मान्छे, सिटौला सर निजामती कर्मचारी। हामी त सबै कुरा स्ट्रेट फरवार्ड गर्छौं। उहाँहरू त कानेखुसी गर्नुहुँदो रैछ। पछि गएर दुर्घटनामा पर्नुभन्दा बरू अहिले नै छुट्टिनु राम्रो भन्ने लागेर अन्तिम समयमा अलग भएका हौं,’ खरेलले भने।
उनले अभियानको राजनीतिक दर्शनका बारेमा पनि आफूहरूको कुरा नमिलेको बताए।
‘हामीले कुनै निहित स्वार्थ राखेका छैनौं। तर उहाँहरूको त राजावादी के-के हिडन इन्ट्रेस्ट रैछ,’खरेलले भने,‘पहिला पनि म नेपालका लागि नेपालीको कार्यक्रममा गएको थिएँ पछि उहाँहरू राजसंस्थाको वकालत गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि जाँदै गइनँ।’
उनले आफूहरूले अब छुट्टै नयाँ अभियान सुरू गर्ने बताए।
‘भ्रष्टाचार, कुशासनका विरूद्ध हामी जनतामाझ त जान्छौं नै अब केही दिनमै हामी त्यसको घोषणा गर्छौं,’ उनले भने।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन १५, २०७६, १८:०६:००